IGWE NHAZI NGWA NGWA NLEKOTA KỌMPUTA - ESI MEE - 2019
Igwe nhazi ngwa ngwa nlekota kọmputa
Windows SmartScreen bụ nkà na ụzụ nke na-enye gị ohere ichedo kọmputa gị site na mwakpo mpụga. A na-eme nke a site na ịgụ isiokwu na mgbe ahụ na-ezipụ faịlụ ndị ebudatara na Ịntanetị, netwọk mpaghara ma ọ bụ na-abịa site na netwọk nke mbughari na sava Microsoft. Software nyochaa ntinye aka dijitalụ na igbochi enyo data enyo. Nchedo na-arụ ọrụ na saịtị ndị dị ize ndụ, na-egbochi ịnweta ha. Isiokwu a ga-ekwu banyere otu esi ehichapụ atụmatụ a na Windows 10.
Ihe mere eji egbochi usoro nchebe a bụ otu: ụgha ugboro ugboro, site na onye ọrụ ahụ na-ele anya, na-akpata. Site na omume a, SmartScreen enweghị ike ịmepụta usoro a chọrọ ma ọ bụ mepee faịlụ. N'okpuru ebe a bụ usoro nke omume maka ngwọta nwa oge maka nsogbu a. Gịnị mere "nwa oge"? Na n'ihi na mgbe ị wụnye usoro "enyo", ọ ka mma ịgbanwere ihe niile. Enwekwu nchebe emerụghi onye ọ bụla.
Nhọrọ 1: Usoro N'uba Obodo
Windows 10 Ọkachamara na Ụlọọrụ Ụlọ Ọrụ "Mpaghara Group Policy Editor", nke ị nwere ike ịhazi omume nke ngwa, gụnyere usoro.
Anyị na-amalite ngwa site na menu Gbaa ọsọnke meghere na isi Nchikota merie + R. Lee, anyị tinye iwu ahụ
Gaa na ngalaba "Nhazi Kọmputa" ma na-emeghe alaka "Templates Administrative - Components Windows". A na-akpọ folda anyị chọrọ "Explorer". N'aka aka nri, na ihuenyo ihuenyo, anyị na-ahụ onye nwere ọrụ maka ịtọlite ​​SmartScreen. Mepee aha ya site na ịpị ugboro abụọ aha nke oke ma ọ bụ soro njikọ nke egosiri na nseta ihuenyo.
Anyị na-eme ka iwu ahụ jiri bọtịnụ redio gosipụtara na nseta ihuenyo, ma na windo ogidi họrọ ihe ahụ "Gbanyụọ SmartScreen". Anyị pịa "Tinye". Mgbanwe na-emetụta enweghị nlọghachite.
Ọ bụrụ na ị nwere Windows 10 Home arụnyere, ị ga-achọ iji njirimara ndị ọzọ iji gbanyụọ njirimara ahụ.
Nhọrọ 2: Ogwe njikwa
Usoro a na - enye gị ohere iwepu nzacha ọ bụghị naanị maka nbudata n'ọdịnihu, mana maka faịlụ ebudatara. Ihe ndị a kọwara n'okpuru ebe a kwesịrị ime site na akaụntụ nwere ikike nhazi.
Anyị na-aga "Ogwe njikwa". Ị nwere ike ime nke a site na ịpị bọtịnụ ahụ "Malite" ma na-ahọpụta ihe omume ihe omume dị mkpa.
Gbanwee "Obere Oyiyi" ma gaa mpaghara "Nchebe na Ọrụ".
Na window nke meghere, na menu na ekpe, anyị na-achọ njikọ maka SmartScreen.
Kwadoro maka ihe a na-akpọghị aha nhọrọ a na-akpọ "Emela ihe ọ bụla" wee pịa Ok.
Nhọrọ nke 3: Gbanyụọ Njirimara
Iji gbanyụọ SmartScreen na ihe nchọgharị Microsoft, ịkwesịrị iji ntọala ya.
Meghee ihe nchọgharị ahụ, pịa akara ngosi ahụ na ntụpọ dị n'akụkụ aka nri nke interface ma gaa ihe "Nhọrọ".
Anyị na-emeghe ọnụọgụ ndị ọzọ.
Gbanyụọ atụmatụ ahụ "Na-enyere aka kpuchie kọmputa".
Nhọrọ 4: Gbanyụọ atụmatụ Ụlọ Ahịa Windows
Akụkụ ahụ a na-atụle n'isiokwu a na-arụ ọrụ maka ngwa sitere na Windows store. Mgbe ụfọdụ mmalite ya nwere ike ịkpata mmemme nke mmemme arụnyere na Ụlọ Ahịa Windows.
Gaa na menu "Malite" ma mepee windo ogidi.
Gaa na ngalaba nzuzo.
Tab "General" gbanyụọ nza.
Taa, anyị enyochawo ọtụtụ nhọrọ maka ịhapụ ntinye SmartScreen na Windows 10. Ọ dị mkpa icheta na ndị mmepe na-agbalị ime ka nchekwa nke ndị ọrụ os ha dị elu, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ "kinks." Mgbe ịmechara ihe ndị dị mkpa - ịwụnye ihe omume ahụ ma ọ bụ ileta saịtị a gbochie - gbanwee nza ọzọ iji zere ọnọdụ na-adịghị mma na nje ma ọ bụ phishing.